Lensa fahitana tokana
CR39 1.499 Tanjon'ny fahitana tokana
1.56 Lensa fahitana tokana
1.61 MR8 Lensa fahitana tokana
1.67 MR7 Tanjona fahitana fahitana
1.74 Lensa fahitana tokana
1.591 Lens Polycarbonate
Lensa mandroso / bifocal
1.499 Lensa Bifocal Flat Top
1.499 Kodiarana bifocal boribory ambony
1.499 solomaso mandroso
1.56 Lens Fandrosoana
1.56 Fantsom-pahalalana miovaova
1.61 Lens Fandrosoana
1.56 Photogray mandroso
1.56 Photogray fahitana tokana
1.61 Lens Photogray
1.67 Lens Photogray
Solomaso anti-Blue Ray
1.56 Lensa fanapahana manga
1.56 Tapaka manga mandroso
1,56 Photogray Blut Block Lens
1.61 Kofehy manga manga
1,67 Kofehy manga manga
1.591 Kavina fitaratra manga
Kodiarana vita semi
1.56 SV Semi Vita UC / HC / HMC
1.56 SV PhotoGray Semi Vita UC / HC / HMC
1.56 Semi mandroso vita UC / HC / HMC
1.56 Fandrosoana Photogray Semi vita HC / HMC
1.499 Semi mandroso vita UC / HC
1,499 Flat Top Semi vita UC / HC
Tarehin'ny solomaso Titanium
TR Frame solomaso
BIFOKALIA SY FANDROSOANA
Fotoana fandefasana: Dec-10-2020
Bifocal: Solomaso misy vina roa misy fahitana misaraka tsipika. Amin'ny ankapobeny ny tampony dia tendrena ho an'ny fahitana lavitra na lavitra lavitra amin'ny solosaina ary ny ambany ho an'ny asa eo akaikin'ny fahitana toy ny famakiana. Ao amin'ny solomaso Bifocal, ny sehatry ny fahitana roa dia miavaka manokana amin'ny tsipika hita maso. Ny farany rea ...Hamaky bebe kokoa »
2020 septambra Wenzhou International Optical Fair
Fotoana fandefasana: Sep-18-2020
Ny foara optika iraisam-pirenena Wenzhou faha-18 (WOF 2020) dia hatao ao amin'ny Ivotoerana Fivoriambe sy fampirantiana iraisam-pirenena Wenzhou manomboka ny 18 septambra hatramin'ny 20 septambra 2020! Ny refin'ity fampirantiana ity dia hahatratra 30.200 metatra toradroa ny velaran'ny fampiratiana, miaraka amin'ny 410 co ...Hamaky bebe kokoa »
Trano SILMO amin'ny Fetiben'ny Optika Iraisampirenena amin'ny taona 2020
Fotoana fandefasana: Aug-26-2020
SILMO2020, Fair International Optical and Optical any Paris, dia voapetraka izao! SILMO France International Optical Fair dia hetsika fampirantiana matihanina manankarena isan-taona. Natomboka tamin'ny 1967 izy io ary manana tantara 50 taona mahery. Voakasiky ny valanaretina, tamin'ity ...Hamaky bebe kokoa »
Ny angon-drakitra momba ny varotra vahiny avy any Danyang City hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny Jona 2020
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona 2020, ny sandan'ny importa sy ny fanondranana solomaso Danyang dia 208 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 2,26% isan-taona, mitentina 14,23% ny sandan'ny importa sy ny export any Danyang. Anisan'izany ny fanondranana solomaso US $ 189 tapitrisa, fihenan'ny 4,06% isan-taona, ...Hamaky bebe kokoa »
Road No2, New Wanbao Road, Fenghuang Industrial Park, Yanling Town, Danyang City, Jiangsu Province, Sina
Bifocal: Solomaso misy vina roa misy fahitana misaraka tsipika. Amin'ny ankapobeny ny tampony dia tendrena ho an'ny fahitana lavitra na lavitra lavitra amin'ny solosaina ary ny ambany ho an'ny asa eo akaikin'ny fahitana toy ny famakiana. Amin'ny solomaso Bifocal, ny roa fi ...
2020 Septambra Wenzhou International Opti ...
Ny foara optika iraisam-pirenena Wenzhou faha-18 (WOF 2020) dia hatao ao amin'ny Ivotoerana Fivoriambe sy fampirantiana iraisam-pirenena Wenzhou manomboka ny 18 septambra hatramin'ny 20 septambra 2020! Ny refin'ity e ...
Trano SILMO ao amin'ny Internationale Paris Paris ...
SILMO2020, Fair International Optical and Optical any Paris, dia voapetraka izao! SILMO France International Optical Fair dia hetsika fampirantiana matihanina manankarena isan-taona. Natomboka tamin'ny taona 1 ...
Danyang City solomaso any ivelany trad ...
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona 2020, ny sandan'ny importa sy ny fanondranana solomaso Danyang dia 208 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 2,26% isan-taona, mitentina 14,23% ny sandan'ny importa sy ny export any Danyang. Anisan'ireo ...
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. 苏 ICP 备 11022256 号 -1